Akụkọ - Vidiyo na broshuọ - Ngwá Ọrụ Dị Egwu maka Ahịa Ngwa Ngwa Are na-achọ ngwa ahịa ahịa dị mma nke na-ejikọ vidiyo na mbipụta iji zụọ ahịa gị ngwa ngwa?
Akwụkwọ broshuọ ga-enyere gị aka ime atụmatụ dị otú ahụ n’ụzọ dị irè. Ọ na-eme nkọwa zuru oke na nke ziri ezi nke ngwaahịa, ọrụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị n'akụkụ abụọ - vidiyo na mbipụta. Akwụkwọ mbipụta nkịtị nwere ike ịme nkwalite gị, ma ọ bụ mee ya n'ụdị 'mgbasa ozi mgbasa ozi'. Ime mgbasa ozi ịbụ echiche dị mbụ nwere ike iduga n'echiche na-ezighi ezi banyere akara gị.
Emeputa ihe maka ezigbo ahia vidiyo
1. Gaa na youtube ma chọọ mkpụrụokwu ụlọ ọrụ gị maka ụfọdụ mmụọ nsọ ma ọ bụ nghọta banyere otu esi emepụta ihe nkiri kachasị mma na ụlọ ọrụ gị.
2. Depụta ikike azụmaahịa gị na / ma ọ bụ ogidi ndị doro anya ma doo anya na uru ị na-enye ndị ahịa yana otu ị si dị iche na asọmpi gị.
3. Chee echiche banyere ihe ọhụụ ma ọ bụ ndị mmadụ nwere ike ịkọ akụkọ gị kacha mma. Ọ bụ gị ka ọ bụ ndị ahịa gị ka ọ bụ ndị na - ebunye gị? Jụọ onwe gị, olee otu m ga-esi weta akụkọ anyị na usoro faịlụ?
4. Hụọ onye na-emepụta ihe nkiri ma ọ bụ onye nduzi ihe nkiri na nnukwu folio ọrụ nke nwere ike ịgwa gị ihe nsonaazụ na fim ha mepụtara. Ga ahụ ụlọ ọrụ dị elu nwere ike ịmepụta ihe nkiri cinematic ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ ihe nkiri na-amalite na mmefu ego ha ga-adịgasị iche iche. Se ihe nkiri bụ ọrụ nke na-ewe ogologo oge na mbọ iji mụta, yabụ gbaa mbọ were ndị mmadụ n'ọrụ bụ ndị isi n'ọrụ ha, n'ihi na ha ga-eme ka ị maa mma. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ nwere ihe ịga nke ọma na-eme ọdịnaya dị na iPhones, ọ ga-abụrịrị na ha wuru akara ngosi tupu ha ekesaa ọdịnaya.
5. Brainstorm ya na ndị na-eme ihe nkiri na usoro kachasị mma iji kọọ akụkọ gị. Ọ bụ obere ihe nkiri eserese, ụdị akwụkwọ, vox pop, ụlọ nka ma ọ bụ usoro ịgba akaebe? All nnukwu fim na-agụnye ezigbo nkwadebe.
6. Kọwaa otu ihe ị chọrọ ka onye na-ekiri ya si eche mgbe ịlechara ihe nkiri gị yana ma enwere oku ịkpọ oku? Kpebisie ike ebe a ga-ekesa ihe nkiri gị - youtube, weebụsaịtị ụlọ ọrụ, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter - n'ihi na nke a nwere ike imetụta otu esi esere akụkọ gị?
7. Gaa na oge ịse ihe nkiri iji hụ na ihe nkiri a dị na ozi na ihe ị bu n'uche n'ihi na ị ga-ama akara gị karịa onye ọ bụla.
8. Na-ajụ maka ihe nkiri nchịkọta akụkọ dị ka edit bụ naanị mere mfe mgbe ezi atụmatụ na film e dechara. Gbaa mbọ hụ na nkwekọrịta ahụ kwuru na ị nwere ike ime ndezi akwadoro na ụdị nke emechara.